Wasiirka waxbarshada ee dowladda Puntland oo kormeeray goobaha waxbarasho ee magaalada Gaalkacyo, sheegayna inay deeqaha waxbarshada ku dadaalayaan. – Radio Daljir
Wasiirka waxbarshada ee dowladda Puntland oo kormeeray goobaha waxbarasho ee magaalada Gaalkacyo, sheegayna inay deeqaha waxbarshada ku dadaalayaan.
Maarso 28, 2012 12:00 b 0
Galkacyo, Mar 28 -Wasiirka waxbarshada ee dowladda Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa oo ay wehliyaan masuuliyiinta wasaaradda waxbarshada ee gobolka Mudug ayaa maanta kormeeray goobaha waxbarasho ee magaalada Gaalkacyo.
Goobaha waxbarsho ee wasiirku uu kormeeray ayaa kala ah Dusgiga sare ee Cumar Samatar, dugsiga hoose iyo dhexe ee Salaama iyo dugsiga Xaaji Cali Biixi.
Wasiirka ayaa intii uu kormeerka waday waxaa uu khudbooyin kale duwan uu u jeediyay ardayda waxka barata dugsiyada waxbarshada, waxaana uu dhinaca kale wasiirku uu ka jawaabay su’aallo ay ardaydu weydiinayeen oo taabanaysa baahiyahooda waxbarsho iyo kaalinta ay wasaaradda kaga doonayaan inay taagero kusiiso waxbarashadooda.
“Meelaha aan xooga saari doono waxaa ka mid ah tayada waxbarshada oo awalba inoo ahayd inaan sii xoojino, waxaana sidoo kale ka mid ah dadaalada deeqaha waxbarshada oo ah qaybta ugu weyn ee dhiiri gelin karta tartankaasi iyo tayada waxbarashada” ayuu yiri wasiirka waxbarshada Puntland Cabdi Faarax Saciid Juaxa.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay wasaaraddiisu inay waddo qorshayaal horumarineed oo ay ka mid tahay siyaasadda waxbarshada ee Puntland, sidoo kale waxaa uu sheegay wasiiradiisu inay beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ay u aqoonsanyihiin hay’ad tusaale ah.
3-qof ayaa ku dhimatay rasaas ay kooxo hubaysan ku fureen gaari rakaab ah,Gelinsoor, Mudug.
Wafti uu hogaaminayo Henry Bellingham, wasiirka Britain u qaabilsan arrimaha Afrika oo booqasho ku yimid Muqdisho.